Boqorka Daarood oo Baaq ka soo saaray arinka Muslimiinta Ruhingaha ka hor Dowladda Soomaaliya. | puntlandi.com
Saturday, September 9th, 2017 | Posted by Pi
Boqorka Daarood oo Baaq ka soo saaray arinka Muslimiinta Ruhingaha ka hor Dowladda Soomaaliya.
Wakaaladda Wararka Ee Muslimiinta Ruhingaha “Arakan News Agency” oo ah: Wakaalad si weyn looga daalacdo dunida Muslimka ah ayaa faafisay maanta oo Sabti ah Baaq uu soo saaray boqorka Beelaha Daarood Boqor Burhaan Boqor Muuse. Baaqaas oo ku qornaa Afka Carabiga.
Wuxuu Boqorku ugu horrayn bayaankiisa ku sheegay “in uu aad uga murugsanyahay dhibaatada lagu hayo Muslimiinta Ruhingaha ah,ayada oo dunidoo dhami afkeeda xiratay “.
wuxuu Boqorku dowladda Federaalka ah Ee Soomaaliya ugu baaqay in si dhaqso ah loogu gurmado Muslimiinta Ruhingaha ah.
Wuxuuna yiri ” Waxaan dowladda uu madaxweyne Farmaajo hoggaamiyo ugu baaqayaa in si dhaqso ah loo marti-galiyo Qaxootiga Muslimiinta Ruhingaha ah,dhalasho Soomaali Ahna la siiyo si ay dunida u maraan,loona qareemo,dunidana loo bandhigo dhibaatadooda”.
Wuxuu Boqor Burhaan ugu baaqay Soomaalida in la furo Sanduuqa taakulaynta Muslimiinta Ruhingaha ah,si loo caawiyo loona taageero.
Wuxuu Boqorku bayaankiisa ku sheegay “in madaxda dalalka Islaamka iyo kuwa dhaqankaba looga baahanyahay in ay taageeradooda muujiyaan,cayriyaana safaaradaha dalka Muslimiinta Ruhingaha sidaas ula dhaqmaya”.
Wuxuu Boqorku ugu mahadceliyay bayaankiisa Madaxweynaha dalka Turkiga iyo Xaaskiisa oo moowqifkooda taageeridda Muslimiinta Ruhingaha ah muujiyay,gurmad deg deg Ahna gaarsiiyay.
Boqorka ayaa ka mid noqonaya dhawr madax Dowladeed iyo dhaqan oo ka hadlay arinka Muslimiinta Ruhingaha ah,Meesha dowladda Federaalka ah Ee soomaliya ayan Weli ka hadlin arinkaas.
Wakaaladda Wararka Ee “Arakan News Agency ” ayaa sheegtay in Wasiiru dowlaha Warfaafinta, Isgaarsiinta, hiddaha iyo dhaqanka Puntland C.Fitaax Nuur (Ashkir) uu yahay qoraa u dooda una qareema xuquuqda Ruhingaha,sannadkaan horrantiisana uu Wakaaladda oo xarunteedu ku Taal dalka boqortooyada Sacuudiga carabta booqday,lana kulmay madaxda Warbaahinta Ruhingaha iyo Wakaaladda Wararka Ee “Arakan News Agency”.
Bayaankaan ayaa ah kii labaad Ee uu sannadkaan boqor Burhaan ka soo saaro arimaha dunida Carabta iyo Islaamka,isagoo kii hore ka soo saaray murankii khaliijka Carabta,sheegayna in uu wada hadal u furi doono dalalka khaliijka Carabta.